कुन उमेरको बच्चालाई कति चाहिन्छ क्याल्सियम ?
२०७४ भदौ २७ गते ७:५० मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २७ भदौ । शारीरिक विकासका क्रममा कहिलेकाहीँ बच्चाको हातगोडा दुख्ने समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्यालाई मेडिकलमा ‘ग्रोइङ पेन’ (बढ्दो उमेरको समस्या) भनिन्छ । बच्चामा किन यस खालको समस्या देखिन्छ त ?
उदयपुरमा सुत्केरी हुँन नसकी गर्भवती महिलाको मृत्यु
केडीसीले शुरु गऱ्यो ‘ओरल क्यान्सर स्क्रिनिङ’ कार्यक्रम